श्रीमती बोकेर दौडने प्रतियोगिता |
श्रीमती बोकेर दौडने प्रतियोगिता
प्रकाशित मिति :2018-07-24 11:39:33
ललितपुर । उत्तरी आयरल्याण्डमा जुलाई महिनामा मनाइने डाल्रियडा उत्सवमा श्रीमती बोक्ने दौड प्रतियोगिता एउटा आकर्षण हो । उक्त उत्सवमा ग्लेनार्मको काउन्टी एन्ट्रीममा आयोजना गरिन्छ ।
योे श्रीमती बोक्ने दौड उत्तरी आयरल्याण्डमा आयोजना गरिने एक मात्र यस्तो प्रकारको प्रतियागिता हो । यो खेल डाल्रियडा उत्सवको हिस्साको रुपमा दोस्रो पटक आयोजना गर्न लागिएको हो । पत्रकारहरूले सो प्रतियोगितामा भाग लिन आएका जोडीहरूसँग कुराकानी गरेर उनीहरूको अनुभव र खेलमा अपनाइने तौरतरिकाबारे जानकारी दिएका छन् ।
खेल शुरु हुनु भन्दा केही समय अगाडि गरिएको कुराकानीमा, प्रतियोगिताको अन्तिम चरणमा पुगेका एक पुरुषले भने, ‘यो श्रीमती बोक्ने खेलमा आफ्नो श्रीमतीलाई बोकेर विभिन्न चुनौतिको सामना गर्दै भूईंमा राखिएका मूढाहरू, टायरहरू, पानीको सानो पोखरी र अन्तमा बाँधिएको समानको पोकोलाई पार गर्दै दौड समाप्त गर्नुपर्छ । हामीले यो खेलको बारेमा भर्खरै जानकारी पायौं । हामीले पनि गरौं न त भनेर सोच्यौं र आयौं । शरीर कसको तन्दुरूस्त छ भनेर हेर्न र देखाउन दौडिने छौं ।’
‘होइन, होइन पिडर ! यो त बोकेर दौडिने वाला खेल हो नि’ भन्दै उनको श्रीमतीले उनलाई सम्झाइन् ।
‘हो, यो त श्रीमती बोक्ने दौड पो हो त ! कसरी बोक्दा र दौडिंदा छिटो र सहज हुन्छ भनेर हामी दुई पछाडिको बगैंचामा अभ्यास गरिरहेका छौं । हामी ढाडमा बोकेर सक्दो छिटो दौडिने छौं’ पिडरले भने ।
‘यो नै हाम्रो लागि सरल मापदण्ड हो । पछाडि पिठ्यूँमा चढ्ने र उसँगै दौडने हो’ एक महिला सहभागीले भनिन्, ‘म भाग लिन उत्सुक छु । रमाइलो हुन्छ जस्तो लागेको छ । म त्यो सानो पोखरीमा झरिन भने राम्रै हुन्छ !’
यस प्रकारको प्रतियोगिता स्क्याण्डिनेभीयन देशहरूमा शुरु भएको थियो । यो खेल त्यहाँ बढी प्रचलनमा पनि छ । त्यहाँ ठूला–ठूला प्रतियोगिताहरूको आयोजना गरिन्छ । विभिन्न तरिकाहरूले श्रीमती बोकेर दौड जित्ने चलन छ । श्रीमतीलाई ढाडमा बोक्न सकिन्छ । उनको खुट्टा काँधमा राखेर वा मुन्टो तल खुट्टा चैं घाँटीमा अड्याएर पनि दौडिने गरिएको छ ।